Manao Fihetsiketsehana Ho Fanoherana ny Fandrarana Zavamaneno Ao Amin’ny Garan’ny Metro Ao Hong Kong Ireo Mpiangaly Mozika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2015 6:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Aymara, 繁體中文, 简体中文, Français, English
Mpiangaly mozika milalao ao anatin'ny garan'ny MTR (metro) Tai Wai. Sary: HKFP.
Nosoratan'i Kris Cheng ity lahatsoratra ity ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 4 Oktobra 2015. Navoaka indray ato amin'ny Global Voices ity dika eto ambany ity noho ny fifanaraha-piaraha-miasa.
Olona an-jatony mahery no nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana tao amin'ny garan'ny metro Tai Wai tamin'ny asabotsy hariva 3 Oktobra mba hanohitra ny fampiharana lalàna “mifidifidy” ao amin'ny Mass Transit Railway eo amin'ny entana vimbinina.
Namaly ny fanentanana tao amin'ny Facebook mandrisika ny olom-pirenena mba hitondra ny zavamanenon'izy ireo ao amin'ny garan'ny MTR ireo mpanao fihetsiketsehana milanja gitara, angorodao, trômbonina sy sodina.
Nitranga izao raha nampitandrina mpianatra mozika iray ao amin'ny Oiversite Baptista ny mpiasan'ny MTR mba tsy hitondra lokangabe ao amin'ny garan'ny Tai Wai tamin'ny volana lasa. Niampanga ilay mpiasa ho miherisetra amin'ireo mpiangaly mozika ny sasany noho izy ireo mody tsy mahita ireo entana mavesatra loatra hoentin'ny mpizaha tany sy mpivarotra mpaka entana – dia ireo Shinoan'ny tanibe izay mividy entana ao Hong Kong ary mitondra izany miverina any amin'ny sisin-tany mba amidy indray.
“Mitsangàna hanohitra ny tsy rariny”
Nilaza i Mavis Lung Man-Wai, mpampianatra yangqin izay nanomboka ny fanentanana Facebook fa faly tamin'ny fizotran'ny fihetsiketsehana izy.
Mahatsiaro aho fa nahatratra ny tanjona isika, satria nahazo fandrakofana marobe tamin'ny fampahalalam-baovao. Tsy maninona na manome fahafaham-po ny fitakiantsika na tsia izay valintenin'ny MTR, nanao izay azo natao isika.
Na dia nampanantena fakàn-kevitra amin'ny vahoaka momba ny politikan'ny entana aza ny Vondrona MTR, tsy namaly an'i Lung kosa ny orinasa.
Tsy niresaka tamiko mihitsy ny MTR. Handefasako mailaka manokana izy ireo mba tsy iharan'ny [fampitandremana sy sazy] ny zavamaneno… Manantena aho fa afaka manao zavatra bebe kokoa ny fikambanana ara-mozika toy ny Orikesitra Shinoa Hong Kong, ny fikambanana tahaka ny Filan-kevitry ny Fampandrosoana ny Zavakanto sy ny anjerimanontolo manana sampana mozika, satria ny mpianatra no mila mandeha amin'ny MTR.
Nilaza ihany koa i Lung fa tsy hitondra matetika ny yangqin-ny ao amin'ny MTR, saingy nanomboka ny fanentanana “mitsangana hanohitra ny tsy rariny” izy.
Ramatoa kely Lung sy ny yangqin-ny. Sary: HKFP
Avy amin'ny tarika ao an-toerana mampiroborobo ny soatoavina sy ny kolontsain'ny mponin'i Hong Kong ny atsasaky ny mpanao fihetsiketsehana, tahaka ny Hong Kong Localism Power izay nilaza fa tsy mampihatra ny lalànany manokana amin'ireo mpivarotra mpaka entana ny MTR fa mila vaniny amin'ny olona an-toerana.
Hoy ny vakin'ny sora-baventy iray tamin'ny fihetsiketsehana: “Manenjika Olom-pirenena Hong Kong ny [MTR] fa tsy ny Shinoa mpiditra an-tsokosoko – Tsy mila kolikolin'ny MTR”, raha hoy kosa ny vakin'ny iray hafa: “Mandray kolikoly ny mpiasan'ny MTR ary manampy ireo mpiditra an-tsokosoko tsy handoa haba.”
Tsy nitondra zavamaneno ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana saingy nihiaka teny filamatra manohitra ny orinasa MTR.
Ramatoa kely Ng, mpanao fihetsiketsehana nilaza hoe:
Mipetraka ao Lohas Park aho, tsy maintsy mitondra ny lokangabeko ao amin'ny MTR aho. Folo taona no nananako izany ary nisosa tsara izany taloha – tsy ara-dalàna ny fanomezana fampitandremana ankehitriny ho an'ny olona mitondra zavamaneno. Manohintohina mpianatra maro izany, saingy tsy manan-tsafidy izy ireo.
Ramatoa kely Ng sy ny lokangabeny. Sary: HKFP.
Nilaza izy fa lehibe ny lokangabeny izay 134 santimetatra ny haavony – 4 santimetatra mihoatra amin'ny torolalan'ny MTR.
“Mahafinaritra raha misy kalesy (fitondrana entana) manokana”
Nahasarika ny maro tamin'ny sodiny i Patrick Brousseau, mpampianatra mitafy sikina. Manana soso-kevitra hafa ho an'ny MTRC i Brousseau:
Satria malalaka kokoa matetika ny fiara voalohany sy farany, afaka mangataka fotsiny amin'ny olona miaraka amin'ny entana mavesatra tafahoatra ny MTR mba handeha amin'ireo fiara ireo. Mihevitra aho fa hilaza ny ankamaroan'ny olona hoe “Eny, afaka manao izany aho’, sa tsy izany? Mety ho tsara raha misy kalesy mitondra entana manokana, satria hanampy amin'ny fitondrana ireo bisikileta eny amin'ny fiaran-dalamby izany. Saingy tsy mino kosa aho fa hivaha tsy ho ela ny olan'ny fitondrana entana an-tsokosoko izany […] Raha mampiditra fiara natokana ho an'ny entana … ho an'ny olona mitondra entana mankany Shina ny MTR … dia mety mahazo vola aman-taonina, ary mahafaty vorona roa amin'ny vato iray.
Nitendritendry sy nihira hira malaza amin'ny teny Kantoney ireo mpanao fihetsiketsehana sasany, tahaka ny “Ao ambanin'ny Lanitra Midadasika” hiran'ny tarika Beyond, hira matetika re amin'ny fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia.
hiran'ny tarika Beyond
“Miomana ny handoa onitra aho eto”
Mpanao fihetsiketsehana iray hafa nandoko ny gorodon'ny gara ho fanoherana ny MTRC “manelingelina ny asa fivelomana sy manafoana ny zavakanto”. Nofafany ny gorodona alohan'ny hodiana.
“Fihetsiketsehana manohitra ny MTR manafoana ny zavakanto”
Nilaza ilay mpanao hosodoko Perry Dino, matetika hita amin'ny hetsi-panoherana hoe:
Tokony manome fahafahana ho an'ny olona mba hitondra zavamaneno ny MTR, satria mampianatra mozika izay toy ny asa fivelomana ny sasany ary tsy manam-bola handraisana taxi.
Mpanao hoso-doko i Perry Dino. Sary: HKFP.
Nilaza ihany koa i Dino fa mihoatra ny toro-lalanan'ny MTR amin'ny entana ny tabilaon'ny hosodokony rehefa itarina. “Vonona handoa onitra aho eto,” hoy izy.
Andriamatoa Lee, izay nitondra elo mavomavo atao fanoharana fa tsy zava-maneno nilaza hoe:
Tokony hiaro ny zon'ny ankizy hianatra mozika ny vahoakan'i Hong Kong. Azo natao taloha ny mitondra zavamaneno eny amin'ny gara. Nahoana no raràna izany ankehitriny?
Andriamatoa Lee miaraka amin'ny elony mavomavo. Sary: HKFP.